Indawo ekahle lapho ungachitha khona iholide eligcwele isenzo nokuphumula.
U-Isabelle - BELVILLA unokuphawula okungu-1764 kwezinye izindawo.
Itholakala eMontelparo, leli khaya lamaholide lilungele ukubaleka ngempelasonto. Njengoba kunamagumbi okulala angu-3, leli khaya lingakwazi ukuhlalisa izivakashi ezingafika kwezi-8. Leli khaya linikeza umbono omuhle wepaki kazwelonke i-Monti Sibillini kanye nogu lwe-Adriatic.
Isuphamakethe eseduze iqhele ngamakhilomitha angu-2 ukusuka ekhaya. Uma ufisa ukujabulela usuku ngasogwini lolwandle, i-Adriatic Sea iqhele ngamakhilomitha angama-30. Uma ufisa ukuzwa impilo yasebusuku, izindawo zokucima ukoma ziqhele ngamakhilomitha angu-1.5 kuphela.
Ikhishi elivulekile elinefriji nesiqandisi nohhavini kuyatholakala ezivakashini. Ichibi lokubhukuda okwabelwana ngalo endlini likunikeza ukucwiliswa okuqabulayo ngemva kosuku olude. Indawo yokushisisa emaphakathi isendaweni ukuze uhlale unethezekile. Amabhayisikili aqashiweyo nasezindaweni zokushaja izimoto zikagesi ayatholakala futhi. Ikhaya elilungele izingane linemishini yokudlala kanye nombhede wezingane wabahambi abancane.
Isikhumulo sezindiza esiseduze siqhele ngamakhilomitha ayi-100 ukusuka ekhaya.
Isikhathi sokungena sisuka ngo-4-8 PM futhi siphume phakathi kuka-8-10 AM.
Isakhiwo: Isitezi esiphansi: (Igumbi lokuhlala(umbhede osofa ababili, i-TV), ikhishi elivulekile(uhhavini, isiqandisi), igumbi lokulala(umbhede omkhulu), Igumbi lokulala elinegumbi lokugezela(umbhede okabili, ishawa, indishi yokuwasha, indlu yangasese, i-bidet), Igumbi lokulala eline indlu yokugezela(umbhede okabili noma imibhede eyodwa engu-2, ishawa, indishi yokuwasha, indlu yangasese, i-bidet), umbhede wezingane)
ukushisa(maphakathi), ingadi, ifenisha yasengadini, indawo yokubhukuda(kwabelwane nezinye izihambeli, 15 x 7 m., kuvulwa kusukela ngo-Jun upto futhi okuhlanganisa no-Sep), inkundla yethenisi(ekhokhelwayo), inkundla ye-boules, amathuluzi okudlala, amabhayisikili ayatholakala(akhokhelwayo) , Iposi lokushaja izimoto zikagesi
Le ndlu idinga u-$169 wemali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo. Izoqoqwa ngokwehlukana yisakhiwo ngaphambi kokufika kwakho noma lapho ungena.